uhlelo okusha Isentha
Owabe Isentha isithombe
Izincwajana zemininingwane Setha
Inkampani yenethiwekhi Loader
Indlu Piggy Bank
Izici: 100% Eco-friendly Safety impahla non-enobuthi ebusweni Umdwebo tente play amathoyizi ukuze ugqozi ezihlakaniphile OEM oda kid sika is wamukela Mookids Amathoyizi Co. itholakala e Ningbo Chian, esesikhundleni akaphakeme geography, ukuxhumana. Inkampani yethu ezikhethekile izingane amathoyizi kanye nengane imikhiqizo. Sihlanganyela izici evumayo efana imikhiqizo, amanani, ukumaketha Sisabalalisa ongakhetha kukho hhayi kuphela kakhulu futhi mfushane ukulethwa isikhathi, kodwa futhi imikhiqizo engcono ngenani lentengo elikahle kanye Thina w ngobuqotho ...
Material: Izinkuni, Plywood
Ukupakisha: Umbala Ibhokisi
MOQ: 1,000 amasethi
Delivery: izinsuku ezingu-45
impahla 100% Eco-friendly
Ukuphepha non-enobuthi ebusweni imidwebo
Enza sengathi play amathoyizi ukuze ugqozi kid sika ezihlakaniphile
OEM oda ezifudumele
Mookids Amathoyizi Co. itholakala e Ningbo Chian, esesikhundleni akaphakeme geography, ukuxhumana.
Inkampani yethu ezikhethekile izingane amathoyizi kanye nengane imikhiqizo. Sihlanganyela izici evumayo efana imikhiqizo, amanani, ukumaketha
Sisabalalisa ongakhetha kukho hhayi kuphela kakhulu futhi mfushane ukulethwa isikhathi, kodwa imikhiqizo futhi kangcono ngenani lentengo elikahle kanye
Thina ngobuqotho ukwamukela ukuthi uvakashele inkampani yethu ngaso www. mookidstoy Play futhi nixoxe ibhizinisi, ngabomvu sakha esikhathini eside ubudlelwano bebhizinisi nomunye.
Beech Izinkuni Baby Sikhungo Block Ngokhuni
1, amathoyizi Sikhungo: block ngokhuni, puzzle ngokhuni, izingane ithoyizi umdlalo, Iyizeli, ubuhlalu amathoyizi, i-abacus, ibhalansi ibhayisikili, umntwana amathoyizi, amathoyizi imoto, imoto sokhuni, isitimela ithoyizi, indiza ithoyizi, rocket sokhuni, amathoyizi zomculo.
2, nezinsiza Ukufundisa: Montessori izinto, Froebel, kanye nezinye izinto zokufundisa.
3, tente play amathoyizi: ekhishini amathoyizi, umbophi ithoyizi, ifenisha amathoyizi, unodoli indlu yamapulangwe, zemifino amathoyizi.
4, Preschool Ifenisha & ebaleni lokudlala: izingane embhedeni, etafuleni, isitulo, itafula, iKhabhinethi, ebaleni lokudlala endlini futhi ongaphandle kanye nezinye amathoyizi.
5, amathoyizi isipho yokukhangisa: matterhorn sokhuni, kendama, ukudonsa kanye amathoyizi, njll
6, OEM / ODM ibhizinisi wamukelekile.
Intelligent zemfundo ABC izitembu ngokwezifiso 3d puzzle diy ithoyizi Jigsaw lokhuni iphazili
** Trade elithi: EXW, Fob, CNF, VGA
** Iyalayisha port: Ningbo / Shanghai
** ngemikhumbi: Ngu ulwandle, ngu emoyeni, ngu express
** Pament elithi: T / T 30% idiphozi phambi ukukhiqizwa futhi u-70% esele ngokumelene ikhophi B / L; 100% singenakushintshwaL / C at emehlweni; PayPal; I-Western Union;
** isikhathi Isampula: ngu 7-14days
**Isikhathi sokuthumela: izinsuku 40-55
** le Product Warranty: Thina isiqiniseko imikhiqizo amakhasimende zamukelwa oqeqeshiwe. Uma kukhona izingxenye eziphukile, pls usithumelele izithombe ezinemininingwane nge-imeyili, bese sizokuthumela i-akumiselelwa ngokuvumelana nezimo zangempela.
** kanjani ukuvikela amalungelo ethu angokomthetho ngesiza ngemva ekusebenzeni nawe?
Ungena NDA, ukuvikela umklamo wakho futhi ungawathengiseli kwabanye; Ngama-oda enkulu, siphinde
uyavumelana isayine isivumelwano, okuyinto thina kuphela ukwenza imikhiqizo yenkampani yakho.
** Ingabe kwemvelo ezibonakalayo? Ingabe ukwanelisa FSC ezibonakalayo? impahla Professional futhi isitifiketi kuthiwa ngokunenzuzo eziye zathathwa kusukela 2008. Nyanga zonke sithumelaekhethekile batch upende ukuze SGS testings. Siphinde sibe siqu labs zethu zokuphepha umkhiqizo.
FSC yethulwa kusukela 2010 futhi iyatholakala UK emakethe. Ngakho iyatholakala
ukuthola nge-10% yezindleko okusezingeni eliphezulu ukwedlula commons.
** Ingabe unazo amakhasimende e Melika / Europe? Yikuphi amakhasimende? ikhasimende yethu emhlabeni wonke ngenkathi iYurophu futhi Melika kuyizinto ezibaluleke, ezifana ne-Disney,Target, Amathoyizi R, Hasbro eMelika; Studio100, JMD, METRO, Pampers IKEA e-Europe,
Siye njalo ubudlelwano ibhizinisi nabo.
Previous: Imoto Puzzle Nge Wheel
Olandelayo: Mookids Clock
3d Puzzle Ukwakhiwa Kit
3d Puzzle Ngokhuni
ngokwezifiso ze-Jigsaw Puzzle
Funny ze-Jigsaw Puzzle
IQ Block Ngokhuni Puzzle
IQ Puzzle Ngokhuni
ze-Jigsaw Puzzle iBhodi
ze-Jigsaw Puzzle Mini
Puzzle iBhodi Sikhungo Toy
Puzzle Early Ezemfundo Amathoyizi
Rainbow Ngokhuni Toy Jigsaw Puzzle
Izimoto Ngokhuni Peg Puzzle
Izinkuni 3d Jigsaw Puzzle
Ngokhuni Block Puzzle
Ngokhuni Jigsaw Puzzle
Ngokhuni Puzzle Early Ezemfundo Amathoyizi
Ngokhuni Puzzle Toy
Ngokhuni Puzzle Vehicle
Ngokhuni Toy Ukwakhiwa Kits Puzzle
Ngokhuni Toy Jigsaw Puzzle
Double Ukudlala Ukudoba Game
Amadivayisi: Igumbi 2806, Block A, Cha 933 Tiantong Norh Raoad, Yinzhou District, Ningbo China
Ucingo: +86 574 87628248